गावस्करले भने– सबै खेलाडी र कप्तानले निर्धारण गर्ने हो भने सल्लाहाकार समितिको के काम?
मुम्बई, असार ७ (एजेन्सी)
प्रशिक्षक अनिल कुम्बले र कप्तान विराट कोहलीबीचको विवादले नयाँ मोड लिन सक्ने देखिएको छ। भारतीय क्रिकेटका महान ब्याट्सम्यान सुनिल गावस्करले पहिलो पल्ट यस विषयमा मुख खोल्दै विराट कोहलीको निर्णयले सबै हुने हो भने सचिन तेन्दुलकर, सौरभ गागुली र भिभिएस लक्ष्मण रहेको सल्लाहाकार समितिको के काम? यसलाई भंग गर्दा हुने भन्दै विराटको आलोचना गरेका छन्।
भारतको नयाँ प्रशिक्षक छान्ने कमिटीमा यी तीन पूर्व स्टारलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। उनीहरुले कुम्बलेको सिफारिस गरेका थिए। तर, विराटले कुम्बलेसँग बसेर काम गर्न नसकिने भन्दै भारतीय टिमको प्रशिक्षकमा कुम्बलेलाई आफूले स्विकार नगर्ने बताएका थिए।
‘टिमको खेलाडी र कप्तानको खुसीले प्रशिक्षक छान्ने हो भने सल्लाहकार समितिको आवश्यकता नै किन पर्यो? सिधै वेष्ट इन्डिज गएर भारतीय टिम र कप्तान कोहलीलाई कसलाई प्रशिक्षक बनाउने ? भनेर सोधे भइहाल्यो नी। यसले थुप्रै व्यक्तिको समय बर्बाद हुनबाट जोगिन्छ,’ गावस्करले असन्तुष्टी जाहेर गरे।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार ८, २०७४ ०४:२३:५०